I-Phlogiston Theory kwi-Early Chemistry History
Sayensi I-Chemistry Physical
Ukuthetha ngePhlogiston, Air Deplogistated, kunye neCalyx
Umntu usenokuba wafunda indlela yokwenza umlilo kwiminyaka emininzi eyadlulayo, kodwa asizange siqonde indlela esasebenza ngayo kude kube kutshanje. Iingcamango ezininzi zacetyiswa ukuba zizame ukucacisa ukuba kutheni ezinye izinto zitshiswa, kanti abanye bengenalo, kutheni umlilo wawususa ukushisa nokukhanya, kwaye kutheni ukuba izinto ezishisayo azifani nokokuqala.
I-Phlogiston theory yayiyi-earlyory theory ekuchazeni inkqubo ye-oxidation , eyona yindlela eyenzeka ngayo ngexesha lokushisa nokutsha .
Igama elithi "phlogiston" ligama elidala lesiGrike elithi "ukutshisa", elivela kwi-Greek "phlox", elithetha ityala. I-Phlogiston theory yahlongozwa kuqala ngu-Johann Joachim (JJ) u-Becher ngo-1667. Ingcamango yachazwa ngokuthe ngqo ngoGeorg Ernst Stahl ngo-1773.
Kubaluleka kwePhlogiston Theory
Nangona le ngqungquthela isuka ilahlekile, kubalulekile kuba ibonisa ukuguquka phakathi kweemayikhemikhali ekholelwa kwimimiselo yemveli yomhlaba, umoya, umlilo, kunye namanzi, kunye nabachani bezonyani, abaye baqhuba uvavanyo olwalungele ukuchongwa kwamacandelo eekhemikhali kunye ukuphendula.
Indlela iPhlogiston Yayinikwe Ngayo Ukusebenza
Eyona ndlela, indlela eyayiyasebenza ngayo kukuba yonke into ebusayo yayinezinto ezibizwa ngokuba yi- phlogiston . Xa le nto yatshiswa, i-phlogiston yakhishwa. I-Phlogiston yayingekho ivumba, inambitha, umbala okanye ubunzima. Emva kokuba i-phlogiston ikhululiwe, loo nto esele ibonwa njengento engavumelaniyo , eyenza ingqiqo kubavakalisi , kuba ungeke usitshise.
Umlotha kunye namanxuwa asele kwi-combustion yayibizwa ngokuba yi- calx yento. I-calx inikezela inkcazelo kwiphutha ye-phlogiston theory, kuba yayilinganiswe ngaphantsi kwento yokuqala. Ukuba kukho into ebizwa ngokuba yi-phlogiston, yayikuphi na?
Enye inkcazo yayiyi-phlogiston inokuba nobunzima obubi.
ULouis-Bernard Guyton de Morveau wacebisa ukuba kwakumane nje ukuba i-phlogiston yayingaphezulu kunomoya. Kodwa, ngokutsho komgaqo ka-Archimede, nokuba kukhanya ngakumbi kunokuba umoya ungenakukwazi ukuphendula ngokutshintsha kwezinto ezininzi.
Ngekhulu le-18, amakhemikhali awazange akholelwe ukuba kukho into ebizwa ngokuthi i-phlogiston. U-Priestly uYoseph wayekholelwa ukuba ukutshabalalisa kunokuthi kuhambelane ne-hydrogen. Nangona i-phlogiston theory ayizange inikeze zonke iimpendulo, yahlala ingumgaqo-mgaqo wokutshisa kuze kube ngama-1780, xa i- Antoine-Laurent Lavoisier ibonisa ubunzima abuzange bulahleke ngexesha lobushushu. I-Lavoisier idibene ne-oksijeni, iqhuba uvavanyo oluninzi olubonisa ukuba iqela lalihlala likhona. Xa ubhekene neenkcukacha ezinzima, i-phlogiston theory ekugqibeleni yatshintshiswa nge-chemistry yangempela. Ngowe-1800, ezininzi izazinzulu zamukelwa indima ye-oxygen ekutshiseni.
I-Air Phlogisticated, i-oksijeni kunye ne-nitrojeni
Namhlanje, siyazi ukuba i-oksijeni isekela i-oxidation, yingakho umoya unceda ukutshisa umlilo. Ukuba uzama ukukhanyisa umlilo kwindawo engenalo i-oxygen, uya kuba nexesha elibi. Izazi zeemayiksi kunye neekhemisti zakuqala zaqaphela ukuba umlilo uvutha emoyeni, kodwa kungekhona kwezinye iigesi. Kwisityikityi equkisiwe, ekugqibeleni ilangabi liyakushisa.
Nangona kunjalo, inkcazelo yabo yayingalungile. Umoya ophakanyisiweyo we- phlogisticated air gesi kwi-phlogiston theory eyayigcwele iphlogiston. Ngenxa yokuba sele izalisekile, umoya ogqithisiweyo awuzange uvumele ukukhutshwa kwe-phlogiston ngexesha lomlilo. Yisiphi igesi ababeyisebenzisayo ayengayifuni imililo? Umoya ogqithisiweyo wachazwa kamva njengento ye-nitrogen , eyona nto ebalulekileyo emoyeni, kwaye akukho, ayiyi kuxhasa i-oxidation.
Yiyiphi indawo yokubilisa yeCarbon Tetrachloride?
I-Khemistry Itheyibhile yeZigqeba zeMpahla
Ukuqonda iCorium kunye ne-Radioactivity Emva kokuxutywa
I-Chemistry Emva kokuba i-Sparklers isebenza njani
Iyiphi iMichiza etsha kakhulu?
Inkcazo yamandla kagesi kunye nemizekelo
I-Potassium - Izinto eziMlilo
Imizekelo yeMimandla endle
Adona College Admissions
Uhambo lwesithathu lukaChristopher Columbus
Imihla Engcwele yamaKatolika e-United States
I-Donald Trump yooNobhala beeNcwadi
Imveliso eyiyo Inkcazo (iKhemistry)
Iimpawu zeDamorphodon kunye namanani
Imbali yekhompyutha ye-UNIVAC
Iingcebiso zokuya kwiSithethe seSiganeko
Indlela yokusebenzisa igama lesiJapan elithi Shibaraku
I-Eco-Friendly Kitchen: i-Dishwasher okanye i-Washing Hand?
20 Ama-Action Action Izithombe ezithathwe ngexesha elifanelekileyo nje
Iingcaphuno ezingama-30 ngu-Aristotle
IWest Virginia iPrintable
Itheyibhile yexesha eliqhelekileyo kunye neerhafu eziqhelekileyo zeIonic
2018 Cup Cup
Kwi-Spotlight: UBilly Ward kunye namaDomino akhe
Zingaphi iifayili Ngaba Ndifuna Ukufikelela Kwigalari?